Kushambadzira (kushambadzira) | RayHaber
RayHaber kushambadza - Shambadziro
Turkey, iyo yave paIndaneti kubva 1973 makore uye zvokuvakisa achiita pakakoromoka chinokosha pakutanga uye chete zvinhu zvitsva katarogu KUVAKA Careers Tab ari pamabhuku, zvino kurarama! Kuvaka CATALOG, yakafara [More ...]
Kutumira Makambani Makambani Uzbekistan
Sezvo kufambiswa kwemarori epasi rose kune dzimwe nzira dzakakosha mazuva ano maererano nekutengesa zvinhu kunze kwenyika uye kunze kwenyika, makambani mazhinji ezvemitengo akatanga kushanda munyika yedu. Aya makambani anosanganisira nyika dzeEuropean neAsia. [More ...]
Istanbul Earthquake Platform iri kuvakwa; Kune Earthquake Workshop yakarongedzwa neIstanbul Metropolitan Municipality, sarudzo dzakakosha dzakaitirwa Istanbul. 'Kudengenyeka kwepasi kwezvivakwa, shanduko yemadhorobha, kuvakwa kwenzvimbo dzenjodzi mumatunhu, kubatana kwematunhu ehurumende [More ...]
Yepamusoro Education Council (hec) Maererano nemashoko nokudzidza pane mumayunivhesiti muTurkey pedyo 7.5 47 75 vadzidzi chiuru miriyoni vakaremara chete. Uyezve, dzinenge chiuru 42 yevadzidzi vakaremara vari kugamuchira dzidzo kure. Saka chete [More ...]
Istanbul Metropolitan Municipality Meya Ekrem İmamoğlu'nun Earthquake Workshop yakatanga nehurukuro yekuvhura, zvese zvikamu zvengozi yekudengenyeka kweIstanbul inodyarwa patafura. Kudengenyeka kwepasi kwezvivakwa uye kudzidziswa kwenjodzi, maonero akajairwa nenyanzvi dzemuno nedzepanze [More ...]
Amazon Yemahara Express Kununurwa
Amazon.com.tr 300 inopa Huru Express Dhizavhari service yekutenga pamusoro peTL. 28 Inotengeswa neAmazon.com panguva Inotarisirwa Chishanu uye yakanakisa Muvhuro kuderedzwa nguva pakati paNovember uye 2 Zvita [More ...]